पोविविलाई सन्तुलन र सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्छ : उपकुलपति - Kendra Khabar
पोविविलाई सन्तुलन र सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्छ : उपकुलपति
२०७७, २६ कार्तिक बुधबार ०७:०३
पोखरा, २६ कार्तिक ।
पाखरा विश्व विद्यालयका उपकुलपती प्राडा प्रेमनारायण अर्यालले विश्वविद्यालयलाई सन्तुलन र सहकार्यमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघ नेपाल (ओपेन)ले गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उपकुलपति अर्यालयले विद्यार्थीहरूको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउन सबैले होस्टेमा हैसे गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपकुलपतिले विद्यार्थीको वेदना बुझेर उनीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउन सके मात्रै विश्वविद्यालयको साख र गरिमा पनि दिगो रहने उल्लेख गरे ।
रातदिन नभनी विश्वविद्यालयका लागि खटिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपतिले नीति नियम भित्र रहेर काम गरिने बताएका छन् । नीति नियम नबनेको भए बनाउने र विश्वविद्यालय आफै धानिन सक्ने गरी केही आंगिक कलेजको विस्तार गर्ने उनले योजना सुनाए । साथै केही नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन तथा मेडिकल कार्यक्रमका लागि हस्पिटल सञ्चालन गर्ने सोच आफूमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उपकुलपति अर्यालले ओपेनले विश्वविद्यालयको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको चर्चा गर्दै उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई दिएको इज्जतमा आँच आउन नदिने उल्लेख गरे । सबै सम्बन्धित पक्षसँग संवाद, वहस र छलफल गरी पूर्णकालीन पदाधिकारी नियुक्ति चाँडै टुङ्गाइने बताएका छन् ।
स्वागत कार्यक्रममा ओपेनले अनलाइन क्लासलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्ने, फल र स्प्रिङ सेमेष्टरको परीक्षा तालिका परीक्षाको मोडालिटीसहित आउनुपर्ने, परीक्षाको दिगो विकासका लागि समयमा नै कोर्ष सकिने गरी ४ वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको तर्फबाट रजिष्टारको जिम्मेवारी सम्हालेका प्राडा विष्णुराज तिवारी, व्यवस्थापन संकायका डीन प्रा.हरिबहादुर खड्का, परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सम्हालेका प्राडा टेकराज ज्ञवाली, पोवि प्राध्यापक संघका सभापति हेमराज पाण्डे, कर्मचारी संघका सभापति शिवराज पण्डित तथा ओपेनका तर्फबाट एपेक्स कलेजका प्रिन्सिपल एलपि भानु शर्मा, ओपेनका अध्यक्ष एवम् नोबेल कलेजका संस्थापक नवराज पाण्डे, अक्सफोर्ड कलेज, गैडाकोट, नवलपरासीका प्राचार्य एवम् ओपेनका उपाध्यक्ष ई. हरि प्रसाद भण्डारी, युनिग्लोब कलेजका प्रिन्सिपल एवम् ओपेनका उपाध्यक्ष डा. नरबहादुर बिष्ट, क्रिमसन कलेज अफ टेक्नोलोजी, बुटवलका प्राचार्य देवीप्रसाद भण्डारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।